DAIKON: GURYAHA WAXTARKA LEH, KA HORTAGGA IYO WAXYEELADA DABOCOTA CAD EE JIDHKA BINI'AADAMKA, KALOORIGA 100 GRAM, IYO SIDA LOO QAATO CAAFIMAAD AHAAN MALAB? - BEER CAGAARAN
Khudradda cakiran - dabocase daikon! Guryaha waxtarka leh, ka hortagga iyo cuntooyinka la xaqiijiyay ee caafimaadka dadka
Daikon ama "radish japan" ayaa noqday wax aad u caan ah oo ku yaal Russia. Waxaa la koray beeraha khudradda si loogu diyaariyo suxuuno kala duwan.
Qof ayaa ku magacaaba dabocase, qof dabeylo cad, qaar wuxuu jecel yahay inuu dhadhamiyo faashad. Daikon waxay leedahay qaab-dhismeed gaar ah ee qaybaha, kaas oo u oggolaanaya in loo isticmaalo ma aha oo kaliya cuntada, laakiin sidoo kale ujeedooyinka ka hortagga iyo daaweynta.
Waxaanu u fiirsanaa faa'iidooyinka ruites ee caafimaadka ee qaybaha kala duwan ee dadka, iyo sidoo kale dhibaatada keeni karta in si khaldan loo isticmaalo daikon.
Waxyaabaha kiimikada iyo kalooriyada 100 garaam
Daikon - badeecad gaar ah, taajir ah oo fitamiino iyo nafaqooyin kala duwan. Waxaa ka mid ah:
100 garaam oo badeeco ah ayaa ka kooban 21 Kcal, halka ay jiraan:
baruurta - 0 g;
borotiinka - 1.2 g;
carbohydrates - 4.1 g (fiber - 1.6 g, sonkorta - 2.5 g).
Maxay yihiin sifooyinka faa'iido leh ee dabocase cad iyo sidee ayuu u waxyeeleyn karaa?
Sidii aad mar hore u fahamsanayd alaabtan waa kaydka maaddooyinka waxtar leh ee keeni kara faa'idada marka la isticmaalo si sax ah iyo waxyeello. Ha cunin daikon isla markiiba ka dib marka la cuno caanahasababtoo ah waxay dhaawici kartaa caloosha.
Iyadoo ay sabab u tahay maaddada fiber-ka, isticmaalka daikon laguma talinayo carruurta ka yar 4 sano. Waxaad bilaabi kartaa inaad ilmahaaga u barato alaabta iyada oo la raaciyo yar yar oo dabocase leh saladh, haddii aysan jirin wax mamnuuc ah dhakhtar.
Cunitaanka daikon wuxuu dhaawici karaa ilmaha haddii uu qabo xasaasiyad, sababtoo ah dabocase wuxuu sababi karaa weerarro asmada ah.
Marnaba ha siin ilmaha daikon tiro badan, waxay xakameyn kartaa caloosha iyo mindhicirrada.
Cudurada beerka iyo urolithiasis, daikon waa ka hortag.
Dhallinyaradu, isticmaalka dabocase waxay u saameyn doontaa maqaarka wejiga waxayna caawineysaa in laga nadiifiyo finanka.
Faytamiinku waxay bixiyaan xinjir dhiig ah, calcium wuxuu xoojin doonaa lafaha iyo iliga iliga.
Sheyga ayaa faa'iido u leh horumarka nidaamka dareenka, hurdo caadi ah iyo hagaajinta niyadda ilmaha. Haddii aad u qaadatid si isku mid ah ascorbic, waxaad hagaajin kartaa difaac, iska caabin ah cudurada viral iyo fungal.
Daikon waa in loo isticmaalo si caadi ah wareegga caadada. Waxaa loogu talagalay kuwa qorsheynaya inay uur qaadaan, maxaa yeelay waxay ku jiraan folic acid. Inta aad uurka leedahay, waxay yareyneysaa bararka, waxay hagaajisaa difaaca jirka iyo xaaladaha dareenka. Kalsiyum ku jira daikoon, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid qalfoofka ilmaha. Laakiin marxaladaha dambe way ka fiican tahay in laga fogaado isticmaalka alaabtan.
Hooyooyinka nuujinaya waxay hagaajiyaan nuujinta, laakiin waxay bedeli kartaa dhadhanka caanaha. Sidoo kale, fitamiin B, folic acid iyo thiamin ayaa ka caawin doona gabdhaha in ay caafimaad helaan ayna joogaan qurux, ka saaraan dhammaan sunta iyo sunta jirka.
Ma jiraan farqi u dhaxeeya faa'iidooyinka iyo waxyeelada daikoon ee ragga iyo dumarka.
Laakiin waannu xusuusan nahay dhirta waxay kordhinaysaa awoodda iyo jinsiga ee ragga. Proteinku wuxuu kor u qaadaa kobaca murqaha waxayna noqon doontaa mid faa'iido u leh cayaaraha iyo jecel nashaadka jireed.
Haddii aad isticmaasho badeecad aad u badan, waad dhaawici kartaa jidhkaaga:
Waxaa jira sinnaan la'aan, miyir-beeleed ayaa dhacaya, boogta faafa ee caloosha ayaa sii xumaatay.
Marka gustritis cuno dabocase laguma talinayo.
Waxaa sidoo kale waxyeello u ah in loo isticmaalo cudurrada xuubka xabka.
Daikon wuxuu hoos u dhigaa heerarka sonkorta dhiigga, sidaa daraadeed waxa fiican inaad la tashato dhakhtarkaaga marka hore. Laakiin leh sonkorow, dalagga xididku waa mid aan loo baahnayn.
Marka dhagaxyada kelyaha iyo turqoortu ay xadidaan isticmaalka dabocase.
Warshad Daikon oo ka tirsan qoysaska kaabash. Sidaa darteed, taxaddar haddii aadan haysan khudaarta kaabajka ah.
Marka lagu daro xaqiiqda ah in alaabta aan lagu talinayn carruurta ka yar 4 sano jir, laguma talinayo dadka ka weyn 50 sano. Marka jirdhiska dheef-shiid kiimikaad uu ka wanaagsan yahay inuu la tasho dhakhtar kahor intuusan isticmaalin daikon.
Guryaha dawooyinka iyo talaabo talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo qaato caafimaadka
Tixgeli faa'iido leh dabocase cad:
Daikon waxtar u leh ka hortagga cudurrada wadnaha, maxaa yeelay waxay ka saaraysaa kolestaroolka xad-dhaafka ah.
Badeecadani waa mid lagu buufiyo oo dabiiciga ah. Cellulose waxay si waxtar leh u nadiifisaa mindhicirada sunta.
Waad ku mahadsan tahay xeryahooda borotiinka, daikon waxay ka hortagtaa bakteeriyada inay ka badiso xargaha.
Kala duwanaanshahan waxaa loo isticmaalaa si looga hortago sameynta burooyinka kansarka, si loo baabi'iyo astaamaha arrintia iyo taakulada.
Casiirka roodhiga wuxuu awoodaa in uu ka takhaluso finanka, finanka, madow, da'da da'da iyo lafaha; isku dhaji oo nadiifi maqaarka wajiga. Sababtuna tahay tayada fitamiinada, daikon wuxuu awoodaa inuu xoojiyo timaha timaha.
Thanks to calcium, khudradda cagaaran waxay xoojisaa ilkaha.
Daikon ayaa sidoo kale waxtar u leh cuntada, laakiin looma baahna in loo beddelo daikon. Waxaa lagama maarmaan ah in la mariyo marmarka qaarkood maalin sooman oo leh isticmaalka 100-150 g oo dabocase ah. Ama waxaad samayn kartaa qajaar, isbinaajo, dhir iyo daikon oo saafi ah. Si aad u cabto nooca cocktail sida aad u baahan tahay 1 koob oo maalintii.
Guryaha bakteeriyada ee dabocase waxay caawiyaan sidii ay ula qabsan lahaayeen cudurrada viral ee mareenka neefta.
Daikon waxay ku haboon tahay dadka da 'weyn oo qaba cudurrada beerka iyo kelyaha. Maadaama ay si firfircoon uga saarto dhagaxyada. Laakiin xusuusnow in ay muhiim tahay in la raaco qiyaasta.
Daawo qoris ah oo ku saabsan ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada wadnaha
Sonkor 1-2 tbsp. qaadooyin.
Iska yaree khudradda xididka ku yaalo hareer weyn oo ku dar sonkorta.
Ka tag masska muddo yar, dabocase waa in la siiyo casiir.
Isticmaal sharooto ama ciirsiiye, tuujin juuska galaas galaas.
Codso cabitaan casiir ah 1 qaado qaado ka hor intaadan wax cunin. Juice waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan hal maalin.
Wixii nadiifinta jidhka bini'aadamka ee sunta
Alaabta loo baahan yahay: Daikon.
Xiddaa khudradda xididka ku yaalo xayr aan qalafsaneyn oo tuujin juuska ka soo baxa. Cuntada kasta ka dib, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 100-150 ml casiir.
Talooyinka iyo iska horimaadyada marka la qaadanayo malab
Daikon malab waxaa loo isticmaalaa "bamiin fitamiin". Waxay ku daaweyneysaa sida noocyada cudurro badan, oo ay ku jiraan qufaca. Laakiin waa in aan xusuusanno in qof kasta aanu ku habboonayn habka noocaas ah. Xaaladna ma cuni karin dabocase cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirada, iyo sidoo kale ka dib marka wadnuhu wadno.
Honey waa wax alerjiyo leh, markaa waa inaadan daaweyn qufac si aad u beddesho xasaasiyadaha sii xumaanaya ama xiiqda ka sii dareysa. Dumarka uurka leh, halabuurka noocan oo kale ah wuxuu sababi karaa laf kulul, sidoo kale waa calool jilciye.
Inkastoo xaqiiqda ah in daikon lagula taliyay dadka qaba sonkorowga, malab laguma taliyo dadka noocaan ah. Honey sidoo kale halis u ah dadka qaba wadnaha oo aan shaqeynin.
Dadka ay isku dayayaan in ay miisaanka lumiyaan, malabku sidoo kale waa ka hortag, sababtoo ah waa shey aad u sarreeya.
Wixii kuwa isticmaali kara buuggan waxay bixiyaan fursado fiican ee alaabta. Honey leh daikon waxaa loo isticmaalaa sida mashiinka adag ama sida tincture ah cudurada maqaarka..
Xaalad kasta, kahor intaadan isticmaalin daawooyinkaas, waxaa fiican inaad la tashato takhtar, gaar ahaan haddii aad qabto xanuun dabadheeraad ah.
Markaad isticmaasho daikon, waxaa muhiim ah inaadan waxyeeleynin jirkaaga., Sidaa darteed, si taxadar leh u eeg dib-u-dhiska ama la tasho qof takhasus leh. Ha tijaabin caafimaadkaaga! Haddii badeecadani aan lagugu daboolin, markaa waxaad la yaabi doontaa sida jidhkaagu u kobcin doono walxo waxtar leh oo saameyn doona fayoobaantaada iyo muuqaalkaaga.